Sorare dia miditra amin'ny ekipa iray hafa, ilay goavana Boca Juniors ðŸ‡¦ðŸ‡· - Cazoo
Inona no Cazoo?
Midira ao amin'ny Binance
Ampidiro eto ny fikarohana nataonao
Sorare dia miditra amin'ny ekipa iray hafa, ilay Boca Juniors goavambe ðŸ‡¦ðŸ‡·
Home Â» Home Â» Sorare dia miditra amin'ny ekipa iray hafa, ilay Boca Juniors goavambe ðŸ‡¦ðŸ‡·
tenifototra: Boca Juniors, Sorare
Fotoana famakiana: 2 minuti
Sorare, sehatra miorina amin'ny blockchain niresaka izahay ato amin'ity lahatsoratra ity, izay manova ny lalao baolina kitra nofinofy, ankehitriny dia manambara fa manohana an'i Boca Juniors izy.
Â¡Vamos Boca! ðŸ”µðŸŸ¡ðŸ”µ
Voninahitra ho antsika ny mandray ny sary masina @BocaJrsOficial ny #Shear! ðŸ”¥
ðŸ”­ Eo amin'ny lavanty izao ny karatra fanontana voalohany. Fotoana fanaovana scout: https://t.co/N8zUYv2I17#VamosBoca #OwnYourGame pic.twitter.com/jM2gLr4htd
- Sorare (@SorareHQ) Enga anie 20, 2021
Boca Juniors: goavambe amin'ny baolina amerikana atsimo
Boca Juniors, izay nilalaovan'ilay angano Diego Maradona ary nampiofana ho azy koa, dia nanatevin-daharana ny lisitr'ireo klioba 137 hafa tao amin'ny ekosistia Sorareâ€¦ ekÃ´zistia mitombo haingana tokoa
Ekipa mpandresy loka, na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisampirenena, dia mitentina $ 213 tapitrisa mahery, mirehareha amin'ny toby mpankafy be zotom-po sy mpilalao mahay. Mpilalao kaliberin'i Marco Rojos, mpiaro an'i Manchester United teo aloha, ary Carlos Tevez, angano baolina kitra eo amin'ireo mpankafy an'i Manchester United sy City.
Ny karatra nomerika NFT an'ny kintana Boca Junior ho an'ny lavanty
Taorinan'ity fifanarahana ity dia omena lavanty ireo karatra nomerika an'ny mpilalao Boca Juniors andiany voalohany Tsenan'ny Sorare. Toy ny karatra rehetra ao amin'ny Sorare, ireo karatra ireo dia nahazo alalana feno avy amin'ny klioba ary tsy manitsakitsaka ny zon'ny sary.
Ny firoboroboan'ny tontolo iainana Sorare
Ny fanambarana androany dia tonga telo herinandro latsaka taorian'ny nandraisan'i Sorare ekipa Serie A dimy - Cagliari, Genoa CFC, Hellas Verona FC, UC Sampdoria ary Udinese Calcio. Miaraka amin'ny fidiran'izy ireo, misy ekipa Serie A 11 ankehitriny, ao anatin'izany i Juventus, ao amin'ny tontolo iainana Sorare.
Raha afaka mivarotra karatra nomerika fanontana voafetra ny mpankafy, dia afaka misafidy ny handray anjara amin'ny fifaninanana ihany koa izy ireo ary hahazo valisoa. Raha te hisoratra anarana ianao dia tsindrio ny bokotra etsy ambany. Hanana tombony ianao! Raha vantany vao mividy mpilalao 5 tsy fahita firy ianao dia hahazo karatra fanomezana!
Misorata anarana mba hamonjy SORARE, ho fanomezana fanomezana karatra tsy fahita firy
Miaraka amin'ny rakitsoratry ny fahombiazan'ny Boca Juniors no fotoana mety indrindra hisoratana anarana sy hijerena mpilalao mety ho hitombo ny sandany amin'ny asa matihanina. Amin'ny fisoratana anarana dia manana fotoana ahazoana karatra Boca Juniors NFT kisendrasendra ny mpilalao.
Azafady zarao ity Zarao ity atiny ity
Manokatra varavarankely vaovao
Vakio lahatsoratra hafa
Lahatsoratra talohaAhoana ny fomba fiasan'i Sorare, ny baolina kitra fanta-daza eran'izao tontolo izao izay mandeha amin'ny Ethereum
Lahatsoratra manarakaSorare: inona ny championnat misy amin'ny fahavaratra? Nohavaozina tamin'ny 2022
Mety ho tianao koa izany
Ahoana ny fomba fiasan'i Sorare, ny baolina kitra fanta-daza eran'izao tontolo izao izay mandeha amin'ny Ethereum
Sorare: inona ny championnat misy amin'ny fahavaratra? Nohavaozina tamin'ny 2022
.... MANOMBOKA AVY....
Karohy ny tranokala
Fihenam-bidy 20% amin'ny kaomisiona
Raha mbola mila miditra ao amin'ny Binance ianao dia ampiasao ity kaody referral ity:
na araho ity rohy ity:
Inona no atao hoe AMM, Automated Market Maker?
Azo antoka ve ny Binance? Nitantana 30% amin'ny vola virtoaly amin'ny volana martsa 2022 izany
Inona ny fanangonana NFT vaovao ho avy amin'ny 2022?
Ny metrika hodinihina amin'ny fividianana sy fivarotana NFT
Mividy vola crypto
Ny fototry ny Cryptocurrencies
Mandika ny fanamarihako aho mba hitadidy tsianjery. Raha mety aminao koa izy ireo, dia faly aho.
Hazo merkle Isa manodidina Binance Binance any Afrika Binance Referral ID momba ny referansa Binance Binance SmartChain bitcoin andian-tsoratra Chain Boca Juniors Kaody momba ny referansa Binance Dapps DeFi DEX Ita ethereum Masinina virtoaly Ethereum (EVM) fahaverezana maharitra Launchpad Metamask Fitrandrahana Bitcoin NFT nonce Fambara tsy azo avela pancakeswap fahaverezana maharitra Dobo fisotroan-dronono Porofon'ny asa fahita firy anarana Code Binance Smart Chain Network Tambajotra Ethereum rafitra afovoany rafitra itsinjaram-pahefana Fifampitokisana Sorare Karatra valisoa Karatra tsy fahita firy Sorare Sorare karatra tsy fahita firy Sorare Cards tsy manam-paharoa Stablecoin Uniswap Vitalik Buterin Wallet Mamokatra
Adidiko ny milaza aminao fa mamonjy cookies ny browser-nao. Â¯ \_ _ (ãƒ„) _ /Ä€